A320 mega ngwugwu, ihe nlereanya ọhụrụ?
A320 mega ngwugwu, ihe nlereanya ọhụrụ? 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1359
A ga-atụkwasị ụkpụrụ sharklet ahụ na ngwugwu ahụ? na imeju afọ n'ihi na ugbu a ọtụtụ ụgbọ elu na-aga maka sharklets dị ka american na lufthansa, ọ ga-abụ mgbe ahụ bụrụ onye american livery (onye ọhụụ ọhụrụ)
Ndumodu ikpe azu: site Salyut.
Oge ike page: 0.182 sekọnd